Qubanaha » SAWIRO: Musharax Cumar C/rashiid oo dib Boorka iskaga jafay & Olole Nooc Cusub ah….
SAWIRO: Musharax Cumar C/rashiid oo dib Boorka iskaga jafay & Olole Nooc Cusub ah….
Jan 29, 2017 - jawaab
R/wasaarahii hore ee Soomaaliya hadana ah Musharax Xilka M/weyne Cumar C/rashiid ayaa dib Boorka iskaga jafay Magaalada Muqdishana ka bilaabay kulamo Nooc cusub ah oo ku saleysan Ololahiisa doorashada Xilka M/weynaha Somalia.
Cumar C/rashiid ayaa casuumay odayaasha beesha Daarood ee ka soo jeeda Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo ku taageeray musharaxnimadiisa, waxaana odayaasha laga dalbaday inay saameyn ku yeesheen xildhibaanada beelahooda si ay u taageeraan musharax Cumar C/rashiid.
Waxaa kulanka ka hadlay odayaal fara badan oo ka soo jeeda degaanadaasi iyagoo u balan qaaday inay taageerayaan musharaxnimadiisa.
Ololaha doorashada Cumar C/rashiid waxaa dhibaato ku noqday mushrixinta ay isku beesha yihiin u ee tartamaya xilka kuwaasoo ay ka mid yihiin Cali Xaaji Warsame, C/raxmaan Faroole iyo Siciid C/llaahi Deni.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in ololaha doorashada uu gaaro halka ugu sareysa iyadoo musharixiinta ay ku jiraan xiligii ugu danbeeyay ee xusul duubkooda siyaasadeed.